Izisombululo ekucocwa kweetanki kunye neRobotic Tank | ROV
Ukude kunye neRobotic Tank Solutions zokucoca
I-ROV kunye neNkqubo yokuCoca iTanki ekude
Inkqubo yokuNgena kweeNkqubo zeTanki lokuCoca
Imenyu yokuCoca iiTanki kwimenyu
I-Super Manway Cannon
I-STRIKER TANK ROV
Inkqubo yokuBuyisa i-oyile
ICANDELO LOKUCoca ICandelo leVidiyo
twitter.com instagram.com facebook.com Youtube.com Pinterest.com linkedin.com isisu flickr.com
I-ROV kunye neRobhothi engenaNdlela yokuNgena kweTanki
Ukucocwa kweTrex ekude kunye neRobotic tank yokucoca kunye neenkqubo zokubuyisa ioyile. Eyona ndlela ilungileyo ye-non-Man yokungena kwi-Tank yokucoca ngokuzenzekelayo kunye neNkqubo yokuBuyisela i-Oyili kulapha kwiNdawo yokuGqibela kunye kwindawo yeNkulumbuso yabo bonke abacoci beetanki.
Uyilo lweNkqubo yeoyile kunye nokwenziwa
"INDLELA YOKUQINISEKISA I-HYDRALINK ithethelela ubunkokheli behlabathi kuyilo nasekuyileni i-Robotic kunye ne-Remote tank yokucoca iitanki kunye neNkqubo yokuBuyisa i-oyile"
IiNjineli zeeHydraulic kunye neeNjini zokuhamba kwamanzi
UKUTHENGWA KWENKQUBO YENZA UMSEBENZI NGOKUGQIBELA NOKHUSELEKILEYO KUTSHINTSHIWEYO NGOKUGQIBELA KWENGCALI NGOKUGQIBELA
Imizi mveliso yethu yokucoca iTank Ukucoca uMhla nezikhuselekileyo-kwaye iyimpumelelo kuBacoci beTank kunye nabanini beTank
Iingcali zoMatshini zeHydraulic kunye nezoBunjineli boMbane
Yiza uthethe nathi malunga nokucocwa kwetanki kunye nokubuyiselwa kweoyile kubandakanya ukungena kwabantu, okude kunye neerobhothi. Ingcali yethu eyaziwayo kwihlabathi liphela kunye namava kakhulu u-Tony Bennett Uqalise ukucoca i-oyile ekrwada kunye neetanki zemveliso e-France ngo-1976 kwaye kungekudala wagqiba ekubeni kubekho iindlela ezingcono, ezikhuselekileyo nezilula zokwenza lo msebenzi. UTony wabandakanyeka kuyilo nakwimveliso yeenkqubo ezahlukeneyo zokucoca itanki kubandakanya neenkqubo zokungena zabantu kunye neenkqubo zokubuyisa ioyile. Amava akhe amakhulu kolu shishino amnika ulwazi lokunceda abathengi baqonde ukuba bafuna ukuphumeza ntoni kwaye benze njani ngokufanelekileyo nangokukhuselekileyo. UTony ulinge ngobuninzi beetanki zokucoca iingcinga kwaye unolwazi kakhulu ngento esebenzayo nengasebenziyo. Fowunela okanye uthumele i-imeyile kuTony ngengxoxo.
Ukuveliswa yenye yeendlela esomeleleyo ngazo
Iqela leenjineli zoyilo ezinikeleyo, injineli yoyilo olunamanzi, injineli ye-elektroniki, umphathi weQC kunye nabasebenzi abanezakhono eziphezulu kumgangatho wevenkile. iimveliso. Amandla ethu kwinjineli / uyilo, ukuzenzela kunye nokudibanisa izixhobo ezitsha yi2 ukuya KUNYE. Kunye nokuyila iimveliso zethu, sakha zonke izixhobo zethu ngaphakathi endlwini ezisivumela ukuba senze iimveliso eziqhutywa yinjongo kwaye sigcine inqanaba eliphezulu kakhulu.
Amandla kunye neShishini lezaMandla
Iitanki zeoyile enzima kwiZikhululo zokuphehla amandla, i-ROV kunye neRobotic Materiel yokuphatha kwiNuknoloji yeMveliso izixhobo zethu zisetyenziswa kwilizwe liphela
Imveliso yePetroleum yenye yeendlela zethu ezikhethekileyo
Ngaphezulu kweTanki lokuGcina komhlaba, iitanki ezingaphantsi koMhlaba, iitanki zaselwandle kunye neeVenkile-Uluhlu lwethu lweenkqubo luya kubacoca bonke besebenzisa iindlela ezikude kunye nezirobhothi ukuqinisekisa ukhuseleko lubaluleke kakhulu.
Imibuzo ebuzwa rhoqo kunye neempendulo
I-01 Ngaba i-Tanksweep nozzles yaziswa ngemingxunya esikiweyo eluphahleni lwamatanki okanye kwindawo efakwe kuyo yomlenze ophahla
Iindlela zeTanksweep akufuneki zidideke kwezi ndlela zihlala zingaphumeleli kakuhle ngenxa yezizathu ezininzi 1. I-Nozzles incinci kwaye incinci kumandla abo okudlula kokuhamba okukhulu kuxinzelelo olonelisayo ngelixa i-18 intshi yethu Tanksweep nozzle nganye ihambisa i-660m3 / iyure kwi-10 ibha yoxinzelelo. 2. Ezi zilozi zijikeleza ngokungapheliyo kwaye indlela yazo ayinakulawulwa okanye ibhekiswe apho inokufuneka khona ngelixa iiTanksweep nozzles ziba kwicala lokuhambisa kwaye zihambisa ngokungangqalanga ngevili lesandla esilula ukuya apho zifuna khona. 3. Iziza ezakhiwe ngophahla lwetanki azifakwanga ngenxa yoko itanki kufuneka ifakwe ngelixa iiTanksweep zisetyenziswa xa ulwelo olukutanki luphantse lube yi-1.5m ubuncinci ngentla yeetanki, oku kuqinisekisa ukuba umphunga ukusuka kwindawo engenamanzi awunakudlula phakathi inqanaba lamanzi kwindawo yomoya kwaye ngenxa yoko akukho mfuneko yokufaka itanki. Ewe ukuba umthetho wasekhaya ufuna itanki icocwe kuphela xa ifakiwe loo nto inokwenzeka. 4. I-Nozzles ezenziwe ngophahla lwetanki ziyakwazi ukuphazamisa isaladi kuphela kumgama osisiphelo ukusuka kwindawo yomkhenkce kwaye ke ekuhlaleni kwindawo ekuhlala kuyo izezzzles, oku kuthetha ukuba ukukwazi ukugubungela yonke itanki emininzi yemibhobho yamanzi kufuneka yenziwe kodwa Ewe kona ithamo labo alinakulawulwa ngeli xesha iTanksweep itanki ukuya kuthi ga kububanzi obuyi-50m inokucocwa nge-2 x tanksweepesi, itanki ephakathi kwe-50 ne-80m intsimbi ifuna i-3 x itanki, kunye netanki engama-80-100m ifuna i-4 x tanksweep. 5. Indawo yokungena yophahla idinga indawo yokuwela amanzi kunye nophahla lwetanki ngeli xesha iiTanksweeps zingena ecaleni kwitanki ngenxa yoko akukho mfuneko yendlela yokugoba umoya kunye neefayile kuphahla lwetanki okanye ukuthumela amadoda ukuba asebenze kule ndawo iyingozi kakhulu. 6. Ngenxa yeTanksweep nozzles zinecala elipheleleyo kwicala lokuhamba zonke itanki igutyungelwe kwaye kusetyenziswa ikhamera yokucinga ngomfanekiso ophuphumayo iitanki zedrobhu zingabhekiswa apho zifuneka khona. Ukususa is-sludge kunye nokujikisa amanzi kumxholo wonke weetanki Tanksweep zinamandla okwenza umsebenzi wenziwe ngokuchanekileyo.
Ukuba inqanaba ngaphakathi etankini liphezulu kwimigca, zifakwe njani iiTanksweep
Iitanksweep zisebenza ngokungena ecaleni kwetanki ngeendlela ngokusebenzisa ii-tanksweep ezi-3 (kwitanki yedayimitha engama-80m) Njengoko inqanaba lingaphezulu kwemigca le ayinakususwa. Ke ukufikelela kwiitanki kulungiswe kwitanki kuya kuba kusetyenziswa iProline Hydralink Coldtap flanges. Imipu ebandayo yomphunga obandayo ifakwe kwilindle yendlela ngokucoca umgquba wokuqala wepeyinti kunye nokugqwala ukuqinisekisa ukuba igasket iya kwenza itywina elichanekileyo kunye neefandesi ezibandayo. Emva koko zonke ezinye i-nati kunye ne-bolt ekhusela i-manway lid iyasuswa. Umbhobho wokubandayo obandayo kunye ne-gasket efanelekileyo ke ufakwe kwisigcina-ndlela somgaqo kwaye ukhuselekile. Ngoku iilensi ezishiyekileyo kunye neebholithi ziyasuswa kwaye zithathelwe indawo kunye ne-washers ekhethekileyo kunye namabhanti abonelelwe ngombala wokubanda kwaye ukhuselekile. Umbhobho wokubandayo obandayo unesiqu esine-intshi ye-18 intsimbi efakwe kuso. I-intshi ye-intshi engu-18 ye-intshi EBALASELEYO edongeni ifanelekile kwaye ikhuselwe eplange- gasket. Umatshini oshushu oshushu oshushu we-hydraulic ngoku uyafuneka, oku kunokuba yikontraktha yangaphandle ekhethekileyo ekusetyenziseni oshushu okanye ukusebenzisa umatshini wokuchwetheza weProline Hydralink. Umatshini wokumba ufakwe kwi-intshi ye-18 intshi kwaye ivalve ivuliwe ivumela umatshini wokugriza ukuba usike isilinganiselo yekhuphoni efanelekileyo kwisikhuselo somgaqo. Xa sele usikile umgxobhozo urhoxisiwe nge-coupon yokusika kunye ne-18 ivaliwe. Umatshini wokugrumba uyasuswa kwaye uthathelwe indawo yitankwe kunye ne-nozzle yayo kwisikhundla sokungena. Itanki lokuxhasa elixhaswayo lixhaswe laza lahlulwa ngeendlela ezi-4 zezandla. . Iitanki zokukhwela zidityaniswe ziithayile zemoto ezinikezwe kwifilitha ecaleni kwegumbi leetanki. Kukho i-flange kumacala omabini ukuze elona lula lisetyenzisiweyo kwaye elinye livalwe. Icebo lokucoca lidityaniswe kukufunxa kwempompo kunye nokukhupha umpompo kuxhunyiwe kwicala lokuhambisa itanki.
Sitsalele umnxeba okanye ugcwalise iFomu kuwo nawuphi na umbuzo
I-UK (+44) 7951930633 okanye i-USA (+1) 346-247-8679 ou France (+33) 975170121 ou Bresil (+55) 2135133615
Iiyure zethu zokusebenza
NgoMvulo ukuya nge-8 ekuseni ukuya nge-8pm
I-HYDRALINK ye-Pro-LINE iya kukubonelela ngezixhobo ezisemgangathweni ezihambelana nolindelo lwakho ngexesha kunye nohlahlo-lwabiwo mali.
Ukuba ufuna nasiphi na isiThembiso soShishino seSpecial Sikhona kuwe
Ukusukela ngo-1975 Abasebenzi kwi-PRO-LINE HYDRALINK bazakhele udumo lokuvelisa izixhobo ezikumgangatho ophezulu ngokuchanekileyo ukuze zisetyenziswe kumashishini ohlukeneyo kubandakanya irhasi yeoyile kunye ne-hydraulic besebenzisa ulwazi lwabo olukhulu abalufumeneyo kwiminyaka emininzi kolu shishino.
Imveliso yeWebhusayithi yeWordPress 2019 PRO-LINE Hydralink Webmaster tbfrance@gmail.com IPPR-LINE HYDRALINK 2020 onke amalungelo agciniwe	Uyilo kunye noPhuculo lwe VW Izihloko